SI XUN WAX U SHEEG SIXIR KA DARAN!!!!!!! | Toggaherer's Blog
« YAA KA MASUULA SHIRQOOLKA LOO MALEEGAY KULMIYE EE FASHILMAY?
CALI MOHAMED DAAUUD CIGAALOW AABAHAA DHIMAY EELA REEB, ADNA WAXA KUU WANAAGSAN INAAD AFKAAGA HAYSATO »
SI XUN WAX U SHEEG SIXIR KA DARAN!!!!!!!
Si xun Wax u Sheeg Sixir ka daran!
By: Dr: Cali Yoonis Guure
Shabakaddaha internetka oo ah xubinta ugu muhiimsan ee
warbaahineed ee ka shaqaysa dalka gudihiisa iyo dabadahaba, ayaa runtii ay tahay in ay shabakaduhu soo bandhigaan warar hufan oo dheelitiran.
Hadaba,shabakadu marka ay warbaahin u tahay bulshada ku kala baahsan dacalada aduunka oo dhan ayaa runtii ay muhiim tahay in ay shabakad waliba soo bandhigto warrar
dheeli tiran isla markaana ay dhexdhexaad u noqoto shacabka akhrisanaya.
Waxa shabakadaha caalamka ka reeban in ay qariyaan ama wax dheeriya ku daraan wararka ay u soo gudbiyaan akhristaha faraha badan ee ra’yigooda dhiibanayaa.
Inkastoo aanan xiisaynin shabakada hadhwanaag oo aan u arko
in ay dhinac kaliya u janjeedho sidaan qabo iyo sida dad badan oo aan wax ka waydiiyey ama iga waydiiyey ay u arkaan. Runtii shabakada hadhwanaag waxaan u haystay baryihii hore mid u adeegta shacabka Somaliland oo dhan bal’se arrintu ka duwan sidaa kadib markii aanu aad ugu kuurgalay.
Shabakada hadhwanaag waxay soo qortaa warar aan runtii xiiso badan lahayn. Bal’se maxay tahay sababtu? Hadii aanu aad ugu fiirsanay shabakadu waxay ka qortaa siyaasiyiinta Somaliland qoraalo badan oo ay u dhigto sidii qoraal uu qoray nin siyaasi ah.
Waxa hadaba aan ogaanay in ay shabakadu ka been abuurto siyaasiyiinta dalka qaarkood. Waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso side ku ogaadeen ragani inay ka been abuurto siyaasiyiinta iyo madaxda dalka qaarkood qaarna ay ku amaanto? Waxaan ku ogaanay ka dib markii aanu ka
akhrinay hadalo foolxun oo ay ka qortay siyaasiyiin oo wariyaha hadhwanaag uu u dhigayo in siyaasigu sidaa u af xunyahay. Isla wixii ay ka qortay siyaasiga ay
shabakadu mucaaradka ku tahay yaanu ka akhrinay 3 shabakadood oo kale iyadoo warkii iyo sidii uu siyaasigu hadalka u yidhi aad uga fogtahay sida ay iyagu qoreen. Kadib waxa noo suuragashay in aanu la xidhiidhno siyaasiyiinta qaarkood oo waydiino sidii ay u hadleen, isla markiiba 2 siyaasi ayaa noo soo diray qoraalkii rasmiga ahaa ee ay u gudbiyeen
Tusaale hadii aad akhridin qoraalada siyaasiyiinta eek u jira hadhwanaag, had iyo goor waxa ka horeeya qoraalka rasmiga ah warbixin uu qoraaga hadhwanaag ka bixinayo siyaasiga soo qoray qoraalka oo uu wariyuhu kudhaleecaynayo
ama ku eedaynayo siyaasiga. Waxa ku xiga aragti foolxun oo wariyaha hadhwanaag ka bixinayo siyaasiga. Wariyaha oo shakhsiyada siyaasiga wax ka sheegaya oo aad arkayso inuu mucaarad ku yahay ninka siyaasiga ah. Waxaad arkaysaa hadalo uu wariyuhu qaloocinayo oo u dhigayo in uu yidhi siyaasigu bal’se ka duwan marka aad ka akhrido shabakadaha kale. Kolka qoraalka siyaasigu qoray 2 shabakadood
isku mid u qoranyihiin ee shabakada hadhwanaag ka duwantahay, waxa inoo cadaanaya in shabakada hadhwanaag ka been abuurayso shakhsiga siyaasiga ah.
Kolkii aanu hadana sii dheehanay shabakadu cidda ay
taageerto iyo waxyaalaha ay ka qorto, waxaanu ogaanay in shabakadu u shaqayso hab qabiil iyo cid gaara. Tusaale, shabakadu waxay amaan la boobtaa oo hadaladooda aad u qurxisaa dhawr nin oo isku beel ah oo kala ah. Cabdilqaadir
Jirde oo ay ku tilmaantay in hadalkiisu ka qiimo badnaa kii guurtida, kii Daahir Riyaale, kii C/raxmaan Cirro, kii salaadiinta iyo cuqaasha. Xasan ciise Jaamac oo ay isagana sidaa iyo si la mid ah u taageerto una qurxiso. Cabdilaahi
Darawal oo isaguna la mid ah halka ay siyaasiyiinta kale ka liido oo ka cambaarayso. Waxa kale ee shabakadu aad uga soo warantaa una amaantaa degmooyinka iyo meelaha ay ka yimaadeen raga ay amaanto.
Sidaa waxaanu ku ogaanay in shabakadu tahay mid qabiil u shaqaysa oo ka madhan hanaankii iyo hab dhaqankii dhexdhexaadnimo ee warbaahintu lahayd.
Shabakadu waxa aanay si hufan usoo bandhigin maqaalada
shacabka qaybiyiisa kala duwan ka imanaya oo ay dhinac kaliya wax ka qortaa.
Halka shabakadaha kale ee Somaliland ay mucaarid iyo
muxaafid u yihiin dhex ee ay cidkastana ka soo qoraan maqaalada ay soo gudbiyaan oo aan wax kale lagu darin lana qaloocin hadaladooda. Wariyaha hadhwanaag Hadaladiisu waa Carab dalableh iyo Cillad ka haysata aqoonta shuruucda warbaahinta xorta ah.
DR: Cali Yoonis Guure
Xafiiska,Cilmi baadhista Siyaasada.
This entry was posted on April 11, 2009 at 3:05 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.